Madaxweyne Sheekh Shariif oo kulan kula qaatay xildhibaanno ka tirsan baarlamaaka – SBC
Madaxweyne Sheekh Shariif oo kulan kula qaatay xildhibaanno ka tirsan baarlamaaka
Madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo maanta kula kulmay xarunta madaxtooyada in ka badan boqol mudane oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay qodobbo ay ka mid yihiin shirka ka furmay Nairobi, muddo kororsiga baarlamaanka iyo weliba xilliga kala guurka ah.
Sheekh Shariif ayaa ugu horreyn wuxuu xildhibaannada u sheegay uga mahad-celinayo go’aankii ay ka qaateen shirka Nairobi oo uu ku sheegay inuu yahay mid aanay dani ugu jirin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed.
“Waxaan marka hore idin kugu hambalyeeynayaa mowqifka wanaagsan ee aad ka qaadateen shirka Nairobi, Soomaalida waxaa looga bartay haddii shir loogu yeero inay kala dhuuntaan xitaa haddii ay tahay meel lagu gowracayo,” ayuu yiri Shariif.
“Sababta aad shirkaas u diiddeen oo mowqifkan aad uga qaadateen waa dan Soomaaliyeed, innaguna ma diidanin wadahadal balse waa in wadahadal walba uu ka yimaado Soomaalida, Adduunka waxaa laga rabaa inay ixtiraamaan taladaas ka timid shacabka Soomaaliyeed,” ayuu hadalkiisa raaciyay.
Madaxweynaha ayaa sheegay in dowladda KMG ah ay doonayso inay ku mitido hay’adaha dastuuriga ee dhisan iyo guulihii lagu tillaabsaday, isagoo shirka Nairobi ku tilmaamay mid lagu burburinayo waxqabadka dowladda iyo jirtaankeeda.
“Dowladdan waa mid lagu soo dhisay dib u heshiisiin waxyaabaha ay u taagan tahayna waxaa ka mid ah wadahadal, laakiin ajandayaasha laga hadlayo waxaa iska leh Soomaalida, go’aanka aad qaadateenna waa mid muujinaya inaan siyaasadda u bislaanayno labaatan sano kaddib,” ayuu Madaxweyne Shariif ku yiri xildhibaannada.
Madaxweynaha oo ka hadlay xilliga kala guurka ah ee xukuumadda ayaa sheegay in loo baahan yahay xilli dheeraad ah oo lagu dhameystiro howlaha DKMG ah horyaalla isagoo sheegay in baarlamaanku uu horay go’aan u gaaray balse uu yahay mid u baahan in dib eegis lagu sameeyo oo la waafajiyo danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
“Baarlamaanku waa hay’adda ugu muhiimsan dowladda iyaga ayaa hoggaanka dalka dooranaya, waxaa loo baahan yahay in laga ilaaliyo wax walba oo garaafo gaarsiin kara,” ayuu yiri Sheekh Shariif.
Sidoo kale, madaxweynaha Soomaaliya wuxuu ka hadlay wadashaqeynta xilligan u dhexeysa hay’adaha dowladda, isagoo sheegay in wadashaqeyntoodu ay tahay mid ku xusan dastuurka dalka u yaalla, isagoo tusaale u soo qaatay in marka qoraal oo gudbiyo baarlamaanka uusan guddoonku hordhigin xildhibaannada, taasoo uu ku tilmaamay kali-talisnimo.
Madaxweynuhu wuxuu sheegay in xilligan aysan caalamka ka shaqeynayn keli-talisnimo, isagoo sheegay in waajibaadyada haya’daha dowladda ay yihiin kuwo ku qeexan axdiga loona baahan yahay in hay’ad walba ay dastuurka ku dhaqanto.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Soomaaliya ayaa uga warbixiyay mudanayaashii uu kula kulmay madaxtooyada safarro uu ku soo maray dalalka Uganda, Burundi iyo Ruwanda, kuwaasoo uu sheegay inay si wanaagsan kusoo dhamaadeen.